Zuva rerudo rakarasika: chitsauko chekupedzisira chaJavier Castillo's bilogy | Zvazvino Zvinyorwa
Kwayedza Zuva Rorudo Rwakarasika: Apple
Kana mazuva mashoma apfuura takakuudza nezvazvo bhuku Zuva raakarasika njere, pachiitiko ichi uye kupedzisa iyo biology iwe yaunowana nemabhuku aya, tinoda kupindura newe Zuva rakarasika rudo, chikamu chechipiri chinopera, kunyangwe paine zvimwe zvisingazivikanwe, kune nhoroondo yeaya mavara.
Kana iwe waverenga Zuva raKarasikirwa neUtsanana uye uri kutofunga nezvekutanga iyo yechipiri, unogona. Asi kana isina kubata pfungwa dzako uye usati waipa mukana, inogona kunge iri nguva yekuti utarise zvatakugadzirira kuti uzive zvauchazowana.
1 Ndiani munyori wezuva rudo akarasika
2 Chii iwe chaunofanirwa kuziva usati waverenga Zuva iro iro rudo rwakarasika
4 Vanyori kubva Iwo Zuva Rerudo Rakange Rarasika
Ndiani munyori wezuva rudo akarasika
Kufanana nebhuku pamberi, Zuva iro rudo rwakarasika rwakanyorwa naJavier Castillo. Uye, paakadhinda runyorwa rwekutanga, akasiya avhura mukana wechikamu chechipiri kana akaona kuti chakabudirira. Nekudaro, apo kodzero padzakatengwa kubva kwaari uye bhuku rekutanga rakadzokororwazve, munguva pfupi chikamu chechipiri chaakange agadzira chakaonekwa.
Muchokwadi, iwe unofanirwa kuziva kuti Javier Castillo aive chipangamazano wezvemari uye, mushure mekubudirira kwake nemabhuku ake, akaasiya uye akatarisisa zvizere pabasa rekunyora iro rakamupa budiriro yakawanda.
Yekupedzisira emabhuku aburitswa ari kubva gore rino, Iyo Mweya Mutambo, mairi unotevera fomu yaro yekunyora, yakapusa uye inovaraidza (kana iwe uchinge wanzwisisa "mutambo" unounzwa nemunyori pakati pekare neazvino).
Chii iwe chaunofanirwa kuziva usati waverenga Zuva iro iro rudo rwakarasika
Kunyangwe Zuva iro iro rakarasika rudo richigona kuverengerwa usati waverenga rekutanga, pane mamwe mamonari akarasika kana uchizviita seizvi. Mavara anokura mubhuku rekutanga, saka kana iwe ukaaverenga, iwo anenge asina kukwana. Zvino, ichokwadiwo kuti zvinoita nemunyori nebhuku rino rinenge "kopi" (yatichataura newe zvinotevera).
Semaonero edu, Kuti unzwisise 100% iro bhuku reZuva Rudo Rwakarasika, iwe unofanirwa kuve uine nhoroondo kubva kare, ziva zvakaitika uye nei bhuku racho richitanga nenzira iyoyo (uye haribate pfungwa dzako). Uye zvakare, nekugara uine ruzivo rwevatambi, zvinokutendera iwe kuti utarise pane zvitsva. Iwe unotoziva kuti vamwe vari sei, saka kuziva zvakawanda nezveumwe hunhu kunova chinangwa chako.
Zvino, ko kana usinga verenge yekutanga? Zvakanaka, neimwe nzira, hapana chaizoitika; ndiko kuti, pane zvinhu zvausinganzwisise asi zviri zvishoma, nekuti mabhuku ese ari maviri akafanana kune rimwe uye, kune vane ruzivo rwakanyanya, zvinogona kupedzisira zvave kufungidzira.
Kana zviri izvo zvaunofanira kuziva, chakakosha chinhu ndechekuti 'vanofumura' vatambi vakuru kubva pachirevo chiri mubhuku rekutanga (uye izvo hatidi kukuzarurira) sezvo iri injini yemidzi yechikamu chechipiri ichi. Zvakare mavara, kunyanya Jacob uye nyanzvi yeFBI, maviri eakanyanya kukosha. Kunge "murume akaipa" murungano, kunyangwe isu zvirinani tisataure chero chinhu nezvebhuku rekutanga.
Zuva iro rakarasika rudo rinotanga sezvarakatangira, nemunhu akashama akatakura chinhu chinotyisa muruoko rwake. Kana angomumisa, zvinoita sekunge iye anoziva zvakawanda kupfuura mapurisa, uye ndipo panotangira mutambo, pakati pekare nazvino, uchiteera iwo iwo iwo mutsara, kutsvaga Amanda, mwanasikana waSteven nemusikana Jacob vakadanana naye. Asi izvo munguva yakapfuura, nekuti mune ino nguva isu tichava neaya mavara pamwe nevamwe vari kutaurirana nekuzarura zvitsva.
Zvichida izvo zvinonyanya kuda kuverengwa nemuverengi ndizvo zvinoitika nemumwe munhu, uye ndicho chikonzero nei chero munhu anoverenga chikamu chekutanga achitanga kudzokorora kudzoka neichi chechipiri.
Chinhu chitsva chauchazowana ndechekuti, mubhuku iri repiri, chitsauko chimwe nechimwe chine musoro wezita remumwe wevanyori vanonyanya kutaurwa (vaverengi vazhinji vakanyunyuta nekuti wekutanga aive akashatisa uye munyori akataura nezvedambudziko nenzira iyi)
Vanyori kubva Iwo Zuva Rerudo Rakange Rarasika
Mavara eZuva rerudo akarasika Ivo vakafanana neIro Zuva Rakarasika Kupenga. Asi isu tinotaurawo nezvezviso zvedu izvo zvichave zvakabatana zvakanyanya nechirongwa. Izvi ndeizvi:
Bowring Bowring: Iye muongorori weFBI, aneta nehupenyu hwake hwezuva nezuva uye akagumbuka nekusakwanisa kuzadzisa zviroto zvake zvekuve tsotsi.
Leonard: mubatsiri weBowring Bowring.
Katelyn goridhe: Zviri nezvemusikana akatsakatika makore apfuura, imwe yematambudziko ekutanga aakaongorora. Anozviona sekukundikana.
Jack: ndibaba vokurera vaKatelyn.
Wekuratidzira: ndiye munhu anotanga nyaya, mukadzi asina kupfeka uyo anoti anoziva zvichaitika. Saka zvinopengesa muongorori.
Ose mavara aya achabatanawo neavo vatinoziva, saka kune vamwe varatidziri, vakuru uye vechipiri, vaunofanirwa kuteedzera.
Pfungwa pachikamu chechipiri ichi ndezvese zvido. Kune avo vakaifarira, kunyanya nekuti inonyatsodzika mune zvakadzama zvaive zvakasununguka mubhuku rekutanga; uye ndiani asina kuifarira nekuti inotevedzera maitiro akafanana neyekutanga uye, nekudaro, 'inorasikirwa nenyasha dzayo'.
Kwedu isu, tinogona kukuudza:
Kana kupera kweZuva Akarasa Pfungwa Dzake hakuna kuita kuti iwe ude kuziva chii chakaitika kune mumwe munhu, kana kana iwe usinga nzwe chinodiwa icho, zvirinani usachiverenga uye womirira kwechinguva kuti utore kuverenga nekunakidzwa. Zvikasadaro unogona kusuwa.
Kana iwe uchinyatsoda kuverenga, saka zviite, kunyanya nekuti uchazoziva kuti chii chakaitika kumhuri yese, uye chii chichaitika munguva yako ino. Kunyangwe iri yakafanana neyekutanga, pane zvimwe zvinhu zvinokuchengetedza iwe kuenda kuburikidza nemapeji kusvika kumagumo chaiwo (ayo, senge ese emunyori, asingatarisirwe, zvirinani kusvika iwe watove kumagumo).
Wakatoverengera here? Wakafungei nezveZuva rakarasika rudo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Musi wakarasika rudo